10 Plugins WordPress ah oo bilaash ah si loo maamulo socodka shaqada ee tifaftirka | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/10 Plugins WordPress ah oo bilaash ah si loo maamulo socodka shaqada ee tifaftirka
10 Plugins WordPress ah oo bilaash ah si loo maamulo socodka shaqada ee tifaftirka
Dhammaanteen waan ognahay in maaraynta socodka shaqada ee goobta ama blog-ga qoraaga badan ee WordPress ay noqon karto mid adag oo waqti badan qaadata. Waxay qaadanaysaa shaqo aad u badan in si joogto ah loo qorsheeyo, loo maareeyo oo si wax ku ool ah loo qaybiyo macluumaadkaaga. Korjoogteynta habkaas oo dhan waxay noqon kartaa sababta timo badan oo jeexjeexan iyo habeennada hurdo la'aanta. Nasiib wanaag, tani uma baahnid inay xaaladdu adiga ku noqoto.
Aduunyada la yaabka leh ee WordPress plugins ayaa sugaya inay gacan siiyaan, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa xallinaya qayb gaar ah oo ka mid ah halxiraalaha socodka shaqada ee tifaftirka. Waxaanu soo koobnay tobanka qalab ee muhiimka ah ee kaa caawinaya qaabaynta shaqadaada saddexda qaybood ee muhiimka ah ee abuurista nuxurka: qorshaynta, maamulka, iyo qaybinta.
Aan gacmaheena kor u qaadno, macsalaameyno riyada qarawga ah ee ku lifaaqan email-ka aan dhammaadka lahayn iyo faylalka habeysan, oo aan bilowno in WordPress uu shaqeeyo!
1. Liiska hubinta ee hore loo daabicin
Ma isticmaashaa liiska hubinta si aad si joogto ah u soo saarto waxa ugu fiican? Waxaan rajeynayaa in jawaabtu haa tahay! Hagaag hadda waxaad haysataa hab aad kuwan si fudud ula wadaagto qorayaasha kale ee kooxdaada adiga oo isticmaalaya Plugin Pre-Publish Checklist.
Pluginkani waxa uu awood kuu siinayaa in aad abuurto oo aad maamusho liisaska hubinta ee qoraaladaada, boggaga iyo noocyada boostada gaarka ah. Abuuritaanka liiskaaga waa sahlan tahay. Kaliya u gudub Settings> Liiska hubinta ee hore u daabici oo isticmaal goobta "Ku dar Shayga Cusub" ee liiskaaga. Xitaa waxaad ka dhigi kartaa qayb loo baahan yahay oo ka mid ah socodka shaqadaada si liiska hubinta loo dhammeeyo ka hor intaanad daabicin (ama waxaad awood u yeelan kartaa uun digniin). Ka faa'iidayso awoodda liisaska hubinta si aad u qanciso baahida akhristahaaga ee nuxurka tayada ugu sarreeya ee suurtogalka ah.
Faa'iido ma leh in la soo saaro waxyaabo fiican haddii qofna uusan akhriyin. Waxaad u baahan tahay inaad u wanaajiso macluumaadkaaga makiinadaha raadinta si aad ugu darajeyso ereyada muhiimka ah ee saxda ah oo aad u wado taraafikada ku habboon bogaggaaga. Qalad ha samayn - SEO runtii waxay samayn kartaa ama jebin kartaa goob.
Yoast SEO waxay kaa caawinaysaa inaad wanaajiso dhammaan dhinacyada khuseeya ee bogga SEO si aad u hesho goobtaada oo la soo booqdo marar badan. Si la mid ah muhiimada, waxay diiradda saartaa sidii ay kaaga caawin lahayd inaad qorto waxyaabo ka sii wanaagsan iyadoo la hubinayo in ereygaaga diiradda la isticmaalo inta lagu jiro maqaal ama boostada. Waxaan xitaa haysanaa hagaha Yoast SEO si sahlan loo isticmaalo si uu kaaga caawiyo inaad bilowdo.
Yoast SEO waxaa lagu amaanaa sida ugu wanaagsan ee SEO-ka ah ee halkaas ka jira labadaba khabiiro SEO ah iyo kuwa cusubba si isku mid ah oo leh in ka badan hal milyan oo rakibayaal firfircoon si aad ula xiriirto shirkad wanaagsan!
3. Tafatiraha Doorka Isticmaalaha
Haddii aad ka shaqaynayso baloog ama goob isticmaaleyaal badan, waa muhiim in la xakameeyo maaraynta awoodaha isticmaalaha iyo in la awoodo in lagu meeleeyo doorar gaar ah. Dabcan, WordPress waxa uu awood kuu siinayaa in aad xaddiddo doorarka guud ahaan maamulaha, Tifaftiraha, Qoraaga, wax ku darsada iyo raace/daawadeyaasha ee ka baxsan sanduuqa. Ka waran haddii aad rabto inaad doorar gaar ah ama doorar gaar ah u xilsaarto, in kastoo?
Tifatiraha Doorka Isticmaalaha Plugin wuxuu kuu sahlayaa (maareeye ahaan) inaad doorar gaar ah u xilsaarto isticmaale kasta oo marin u leh goobtaada. Dooro ikhtiyaarada ay isticmaalayaashu u heli karaan bog gaar ah ama boostada, kuwaas oo soo dejisan kara plugins, kuwaas oo isbeddel naqshadeed ku samayn kara goobtaada, iyo martigaliyayaasha doorarka iyo kartida kale ee caadooyinka. Ku rakibida plugin-kan waxay ku siinaysaa koontarool adag oo ku saabsan habaynta isticmaalayaashaada iyo u habaynta socodka shaqada si sax ah.
4. Wax ka beddel socodka
Tafatirka Flow waa plugin ugu dambeeya ee lagu maamulayo socodka shaqadaada tifaftirka. Waxay ku siinaysaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abaabusho oo aad ula kaashato kooxda tifaftirka. Marka lagu daro xaalad kalandarka muuqaalka ah ee farshaxanka, socodka Tafatirka wuxuu la imaanayaa sifo awood leh oo loo yaqaan Heerka Gaarka ah - calaamadaha heerka kuwaas oo kaa caawinaya inaad si fudud ula socoto marxaladaha muhiimka ah ee socodka shaqadaada.
Sifooyin dheeri ah sida Faallooyinka iyo Metadata waxay sii sahlaysa wada xidhiidhka wanaagsan iyo wada shaqaynta kooxdaada tafatirka ee sida aadka ah u mashquulsan.
5. Socodka Shaqada Oasis
Ma doonaysaa nooca la fududeeyay ee Socodka Tafatirka? Oasis Workflow waa jawaabta. Waxay haysataa dhammaan qaybaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay si aad otomaatig u sameyso oo aad u abuurto qulqul shaqo oo adag iyadoo la adeegsanayo is-dhexgal fudud.
Waxay bixisaa saddex xaaladood oo caado ah, meelayn iyo awoodaha dib-u-dejinta, taariikhda la filayo iyo xasuusinta iimaylka iyo wax ka badan. Nooca premium ee plugin-ku wuxuu awood kuu siinayaa inaad abuurto qulqulo shaqo oo badan oo leh qiime ka bilaabmaya $49. Ha ku kadsoomin fudaydka nooca bilaashka ah, in kastoo. Waxay kaa caawin kartaa inaad furto xitaa socodka shaqada ee ugu dhibka badan.
6. Jadwalka Tafatirka
Inta badan socodka shaqada tifaftirka ee la hagaajiyay waxay leeyihiin hal qayb oo muhiim ah oo ay wadaagaan: jadwal tafatiran oo faahfaahsan oo si wanaagsan loo ilaaliyo. Si aad u abuurto kalandarka tafatirka waa dulmar muuqaal ah oo si fudud loo dheefi karo oo ku saabsan istaraatiijiyadaada nuxurka weyn oo leh fikrado ka kooban, hawlo iyo waqtiyo dhammaan si cad loo calaamadeeyay.
Tifaftirka Jadwalka Tifaftirka waa jadwal muuqaal ah oo fudud kaas oo heli kara xitaa kuwa ugu kala firirsan ee naga mid ah oo abaabulan oo korka ka ah socodka shaqadeena. Pluginkani waxa uu ku siinayaa dulmar ku saabsan dhammaan qoraaladaada (laga bilaabo qorayaal badan), xaaladahooda iyo goorta la daabici doono. Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada boostada. Ku rakib maanta oo waxaad ku socotaa jidka aad si weyn u nadiifin lahayd macluumaadkaaga
Ugu dambeyntii, jadwalka tifaftirka bulshada oo dhan-in-hal ee WordPress! Qalabka CoSchedule waa kalandarka tifaftirka warbaahinta bulshada muuqaal kaas oo jadwal u samayn kara labadaba warbaahintaaga bulshada iyo qoraallada blog-ka isla mar ahaantaana dardar gelinaya socodkaaga shaqada. Waxa ay awood kuu siinaysa in aad saf ugu gasho fariimahaaga warbaahinta bulshada si toos loogu soo diro qoraallo la daabacay. Isku xirka dareenka jiid-iyo-soo-jiidashada ee plugin-ku wuxuu ka dhigayaa sawir-qaadista iyo toosinta socodka shaqadaada tifaftirka bulshada mid fudud oo xiiso leh.
Miyaysan ahayn wax la yaab leh inaad awood u leedahay inaad la wadaagto macluumaadkaaga weyn kanaalada bulshada oo aad la falgasho isticmaalayaasha bulshada isla markiiba gudaha WordPress? Qalabka Jetpack ee loogu talagalay WordPress ayaa jira si uu kaaga caawiyo inaad taas sameyso - iyo wax ka badan - dhammaan laga bilaabo raaxada dhabarka WordPress.
Jetpack waxaa ka buuxa qalab iyo astaamo diiradda saaraya abuuritaanka taraafikada iyo waxqabadka bulshada. Qalabka dacaayadeynta, tusaale ahaan, wuxuu awood kuu siinayaa inaad si toos ah ugu qaybiso fariimaha cusub shabakadaha warbaahinta bulshada ee aad dooratay. Waxaad sidoo kale ka cabbiri kartaa waxqabadka qoraalladaada gudaha goobta. Ku rakib Jetpack oo bilow hagaajinta wadaaggaada maanta.
9. Qalabka Goobta Google
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee istaraatiijiyad kasta oo ka kooban waa falanqayn, gaar ahaan tixgelinta wakhtiga iyo lacagta aad ku maalgelinayso suuq-geynta macluumaadkaaga cajiibka ah.
Falanqaynta Google waa bilaash waxayna ku siinaysaa aragtiyo la taaban karo oo ku saabsan dhagaystayaashaada, cabbirada goobta muhiimka ah, iyo guud ahaan waxqabadka suuqgeyn. Waxaad markaa u isticmaali kartaa aqoontan inaad ku wargeliso oo aad toosiso istiraatijiyaddaada suuq-geynta guud.
Qalabka Google Site Kit ee bilaashka ah wuxuu bixiyaa taraafikada tafatiran, cabbiraadaha tirada iyo waxqabadka muhiimka ah, dhammaan si fudud ayaa lagu heli karaa gudaha dashboardkaaga WordPress. Mar dambe naftaada ku lumin moolka Google Analytics. Waxaad heli doontaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay (oo ay la socdaan adeegyada kale ee Google sida Adsense, PageSpeed ​​Insights iyo in ka badan) si aad go'aannada ugu gaadho halkaas halka aad uga baahan tahay.
Bal qiyaas in aad hurdada ka kacdo si aad u hesho sannado badan oo kakooban oo si fudud hal maalin u baxay. Waa fikir ka buuxinaya tifaftirayaasha cabsi. Hubi inaad ku kaydiso WordPress goobtaada oo aad ka ilaaliso waxyaabaha qiimaha leh UpdraftPlus (ama plugin kale) si joogto ah qayb ka mid ah socodkaaga shaqada. Plugin-kan bilaashka ah waxaa si gaar ah loo dhisay si looga ilaaliyo shilalka goobta iyo fududaynta socdaalka xogta. Baro wax badan oo ku saabsan sifooyinka plugin this dib u eegis UpdraftPlus.
dhunkasho nabad gelyo si aad uga welwelto goobtaada oo ololaysa oo isticmaal nabaddaas maskaxda si aad u bilowdo diiradda saaraya waxyaabaha weyn ee aad berri la wadaagi doonto iyadoo la kaashanayo dhammaan plugins-yada weyn ee WordPress ee liiskayaga.
Si daacadnimo ah oo loo maareeyo socodka shaqada tifaftirka ma aha inay noqoto halgan. Waxaa habboon in waqti la geliyo si loo baaro doorashooyinka sida kuwa aan kor ku iftiiminay. Hababkaaga sax oo waxaad dareemi doontaa hubaal oo ku faraxsan goobtaada guud ahaan, oo aad u rajaynayso nuxurka weyn ee aad hadda hubiso inay soo degayso xariiqda.
Markaad ku rakibto qaar ama dhammaan plugins-yada liiskayaga, waxaad u socotaa waddo dheer oo toos ah, hagaajinta iyo hagaajinta socodka shaqadaada tifaftirka. Tani waxay ku xoraynaysaa inaad diirada saarto si joogto ah u abuurista nuxurka ugu fiican ee suurtogalka ah iyadoo ay weheliyaan koox qorayaal faraxsan, wax soo saar leh oo ku taageeraya.
Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno sidaad u aragto liiskayaga iyo haddii aad hayso wax soo jeedin ah oo aanu seegnay. La wadaag talooyinkaaga iyo fikradahaaga faallooyinka!
Waxa Kooxda Xidhiidhka Raadinta Google ay samaynayeen iyaga oo ka jawaabaya COVID-19 [Muuqaal]
10 Aaladaha Suuqgeynta Xiriirinta ee Caawinta leh